အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်သုံး Wi-Fi ချန်နယ်- ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ? | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Jose Albert | 13/01/2022 15:54 | အဆင့်မြှင့်တင် 13/01/2022 16:26 | အင်တာနက်ကို
ယနေ့ ဆက်သွယ်မှု ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များနှင့် အင်တာနက် အလုပ်အတွက်ရော လေ့လာဖို့ရော အပျော်အတွက်ရော မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အဲဒါ ဆက်သွယ်မှု အထူးသဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကနေတစ်ဆင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပိုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဝိုင်ဖိုင် ဖြတ်. ကြိုးမဲ့ access point ၎င်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုအားကောင်း၊ ထက်မြက်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်။ သို့သော် အသက်ကြီးလာလေလေ အလုပ်အကိုင် တိုးလေလေဖြစ်သည်။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု၎င်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို နားလည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား တွန်းအားပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်ခုရွေးချယ်ရန်ပိုကောင်းရှိမရှိသိရန် "အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်" ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွန်ရက်များပေါ်တွင်
ရွေးချယ်ကတည်းက "အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်" ဖြစ်ရခြင်းအတွက် ၎င်း၏ သိပ္ပံ သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝေဒနာအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေသည်။ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုများတွင် အနှောင့်အယှက်များ. ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းမည့် အလွန်အဖြစ်များသောပြဿနာဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Wi-Fi ချန်နယ်ကို ပြောင်းပါ။.
နှင့်ပုံမှန်အတိုင်း, ဤထုတ်ဝေမှု၏လယ်ပြင်တွင်မိန့်ခွန်းမပြောမီ ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုအထူးတလည် ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်း "အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်"ကျွန်ုပ်တို့၏အချို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာပါမည်။ ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ဤနယ်ပယ်နှင့် ၎င်းတို့ထံသို့ အောက်ပါလင့်ခ်များ။ ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့၏အသိပညာကို တိုးပွားစေရန် သို့မဟုတ် အားဖြည့်လိုလျှင် အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်စေရန် ဤစာစောင်ကို ဖတ်ရှုပါ။
"WiFi သည် အိမ်သာသုံးစက္ကူ၊ ရေ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ပင် မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစားအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် အကွာအဝေးကြောင့် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ router နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းကြားတွင် နံရံများစွာရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ အကွာအဝေးပြဿနာ သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့က အခြားပြဿနာများထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော်လည်း ဤပြဿနာများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများစွာရှိသည်။" WiFi signal ကိုဘယ်လိုချဲ့ထွင်မလဲ။ ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများ
ဘာကြောင့် Windows 10 မှာ WiFi မပေါ်လာတာလဲ၊ အဲဒါကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
သင်၏ WiFi စကားဝှက်ကို မည်သို့မျှဝေမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်အခိုးခံရလျှင်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း - အခမဲ့ပရိုဂရမ်များနှင့်ကိရိယာများ
1 အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်- အကောင်းဆုံးချန်နယ်ကို ရွေးပါ။
1.1 ကြိုးမဲ့ကွန်ရက် သို့မဟုတ် WiFi ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
1.2 WiFi Frequencies နှင့် WiFi Channels များသည် အဘယ်နည်း။
1.2.1 WiFi ကြိမ်နှုန်းများ
1.3 အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်ကို ရွေးချယ်ရန် ပိုကောင်းပါသလား။
1.3.1 ကွန်ရက်များ၊ ချန်နယ်များနှင့် ကြိမ်နှုန်းများအတွက် အလိုအလျောက်မုဒ်
1.3.2 ကွန်ရက်များ၊ ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ချန်နယ်များသို့ လူကိုယ်တိုင်မုဒ်
1.4 WiFi ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အရေးကြီးသော အကြံပြုချက်များ
အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်- အကောင်းဆုံးချန်နယ်ကို ရွေးပါ။
ရွေးချယ်ခြင်း၏ ကွဲပြားမှု၊ အားသာချက် သို့မဟုတ် အားနည်းချက်များကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်နိုင်ရန် "အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်" သေချာအောင် အရင်ရှင်းပါ့မယ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အယူအဆများ. ဤအရာသည် ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝရှင်းလင်းစွာ မသိသူများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖြစ်သည်။
ကြိုးမဲ့ကွန်ရက် သို့မဟုတ် WiFi ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အတော်လေးရိုးရှင်းသောစကားအားဖြင့်, တစ်ဦးစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်မက်ထရစ် တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်n (ကွန်ရက်) အချက်အလက်. ထောက်ပံ့ပေးသောကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ပါ။n တူညီသောအထဲမှာရှိသော ထိုကွန်ပြူတာများကြားတွင် ကေဘယ်ကြိုးများမပါဘဲ၊ ဧရိယာ လွှမ်းခြုံမှု (သတ်မှတ်ဧရိယာ). ထို့ကြောင့် ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။mbrica မှတဆင့် data ကိုပို့ပြီးလက်ခံသည်။s of onလျှပ်စစ်သံလိုက်နေ့ရက်များ လေမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။n.
စပ်စုတဲ့အချက်အနေနဲ့ ပြောရရင် ဒီအခေါ်အဝေါ်ကို စဉ်စားပါတယ်။ Wi-Fi သို့မဟုတ် Wi-Fiအချို့သော ကျော်ကြားသော ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အတိအကျ သို့မဟုတ် အစစ်အမှန်ကို မည်သည့်အရာကိုမျှ ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ အတိုကောက်ဟု ယူဆလေ့ရှိသည်။ ကြိုးမဲ့ Fidelity သည်ဒါပေမယ့် မမှန်ပါဘူး။
စသည်ဖြင့် အခေါ်အဝေါ်အဖြစ် ရှိခဲ့ကြပါသည်။ မူလအစ သို့မဟုတ် တီထွင်မှုအမှတ် una စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ (ကြော်ငြာ). အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို ထိုအချိန်က ကြိုးမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ငှားရမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြံစည် အားထုတ်အပ်သော၊ ဖော်ရွေသောအမည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ချဲ့ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဤနည်းပညာအသစ်ကို ရည်ညွှန်းရန်။
WiFi Frequencies နှင့် WiFi Channels များသည် အဘယ်နည်း။
ဤထုတ်ဝေမှုတွင် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုမေးခွန်းကို အပြည့်အ၀နားလည်နိုင်စေရန်အတွက် နောက်ထပ်အရေးကြီးသောဝေါဟာရနှစ်ခုမှာ၊ WiFi ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ချန်နယ်များ.
အဆိုပါအညီ Wi-Fi မဟာမိတ်အဖွဲ့အဆိုပါ စံ ကို IEEE 802.11 လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဝိုင်ဖိုင်နည်းပညာ လက်ရှိ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြား သုံးခုကို ရနိုင်သည်။ အသုံးပြုခွင့်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုအချက်များအဖြစ် တည်ဆောက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများတွင်။ မှတ်သားထိုက်ပါသည်။ Wi-Fi မဟာမိတ်အဖွဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၏ကွန်ရက်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Wi-Fi အသုံးပြုမှုနှင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို တွန်းအားပေးသည်။) ပြီးနောက် စံ ကို IEEE 802.11 ၎င်းသည် ကြိုးမဲ့ဒေသခံကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာကို ထိန်းညှိပေးသည့် တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ လက်ရှိသတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်းများမှာ- 2.4GHz၊ 3.6GHz နှင့် 5GHz တို့ ဖြစ်သည်။. သို့သော်လည်း ယနေ့တွင်၊ လက်ရှိ စက်အများစုသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံသေအတိုင်း လည်ပတ်နေပါသည်။ လှိုင်းနှုန်း 2.4 GHz အနီး. သို့မဟုတ် အထက်၊ လှိုင်းနှုန်း5GHz အနီး.
Wi-Fi နည်းပညာတွင် ၎င်းကို သတိပြုပါ။ ကြိမ်နှုန်းသည် ဒေတာ၏ ထုတ်လွှင့်မှု/လက်ခံမှုအမြန်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်ရှိ စက်ပစ္စည်းများအကြား။ ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုမုဒ်နှင့်ဆက်စပ်သော အချို့သော windows များနှင့် အားနည်းချက်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။ ဥပမာ:
2.4 GHZ ကြိမ်နှုန်းသည် ချန်နယ် 14 ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။၎င်းသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အတားအဆီးများကို တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းနည်းပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပထဝီဝင်လွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေးကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အောက်ပါစံနှုန်းများအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးသည်- IEEE 802.11b၊ 802.11g၊ 802.11n (B၊ G နှင့် N)။
5 GHZ ကြိမ်နှုန်းသည် ချန်နယ် 25 ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။စွက်ဖက်ရန် ခံနိုင်ရည်နည်းပြီး အတားအဆီးများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်း နည်းပါးသည်။ သို့သော် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းများနှင့် ပထဝီဝင်လွှမ်းခြုံမှုအကွာအဝေးကို သေးငယ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အောက်ပါစံနှုန်းများအတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးသည်- IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac (A, N, AC)။
ဖော်ပြပြီးသားစံနှုန်းအရ၊ 2.4GHz ကြိမ်နှုန်းများ တည်ရှိ ရရှိနိုင် 14 လိုင်းများ, ခြားထားသည်။5MHz. သို့ရာတွင်၊ အချို့သောနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာ့ပထဝီဝင်ဒေသများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ အကြောင်း။ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များ၊ ရနိုင်သောချန်နယ်အရေအတွက် ၎င်း၏ရပ်ကွက်တွင်ရောင်းချသောပစ္စည်းများ။
ဤချန်နယ်များရရှိနိုင်မှုတွင်၊ တစ်ခုစီတိုင်းလိုအပ်သော +/- ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ 20MHz လှိုင်းနှုန်း လည်ပတ်ရန်။ ဟုခေါ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆက်နွယ်နေသော ချန်နယ်များ ထပ်နေပါသည်။. ၎င်းကို အောက်ပါရှင်းလင်းချက်ဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးနားလည်နိုင်သည်-
ချန်နယ် 1 သည် ချန်နယ် 2၊ 3၊4နှင့်5တို့နှင့် ထပ်နေပါသည်။. ထို့ကြောင့်၊ အဆိုပါ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးရှိ ထုတ်လွှင့်သည့် စက်ပစ္စည်းများသည် အချင်းချင်း အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုချန်နယ်များမှ ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ချန်နယ်6နှင့် ချန်နယ် 7၊ 8၊9နှင့် 10 တို့နှင့်လည်း ဖြစ်ပွားသည်။. ၎င်းအစား၊ Wi-Fi ချန်နယ်များ အစွန်းမှ 5GHz ကြိမ်နှုန်းများဤထပ်နေပုံမျိုးသည် များသောအားဖြင့် မဖြစ်ပေါ်တတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ၎င်းသည် မကြာခဏနည်းပါးပါသည်။
အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်ကို ရွေးချယ်ရန် ပိုကောင်းပါသလား။
အခုချိန်ထိတော့ အခြေခံနည်းပညာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အချို့ ပါပါတယ်။ ဝိုင်ဖိုင်နည်းပညာထိုသို့သောအဖြစ် ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ချန်နယ်များ အသုံးပြုသည်။ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို အသုံးအများဆုံးကြိမ်နှုန်းများ (2.4 GHz နှင့် 5.4 GHz) ကြားတွင် ပြဿနာဟုခေါ်သည်။ ဆက်နွယ်နေသော ချန်နယ်များ ထပ်နေပါသည်။.
ထို့ကြောင့် ယခု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတိုချုံးပြီး ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါမည်။ "အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်". ကိစ္စတစ်ခုစီအတွက် နားလည်နိုင်သကဲ့သို့ (အချိန်နှင့်နေရာ) တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း စံပြဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ခုက စတယ်။ ကတ် သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ပါ။ ဒက်စတော့ သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့ကွန်ပြူတာမှ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ ၎င်းကိုပြသသည်။ ရနိုင်သော Wi-Fi ကွန်ရက်များ (အသုံးပြုခွင့်အချက်များ). အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်အချို့ကို သင်တွေ့နိုင်သည်-
အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း အမျိုးအစား (Security Encryption)၊
Signal Strength ၊
ကြိမ်နှုန်းနှင့် ချန်နယ်များ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
ကွန်ရက်အချက်အလက် (Mac Address၊ IP လိပ်စာ၊ Gateway၊ Subnet Mask နှင့် DNS)။
ကွန်ရက်များ၊ ချန်နယ်များနှင့် ကြိမ်နှုန်းများအတွက် အလိုအလျောက်မုဒ်
အ စက်ပစ္စည်းများ (ကွန်ပျူတာနှင့် မိုဘိုင်းလ်) ချိတ်ဆက်ရန် ပြင်ဆင်ထားသော ပုံသေအားဖြင့် လာတတ်သည်။ အခမဲ့ Wi-Fi ကွန်ရက်များ ဖွင့်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာ၊ အများသူငှာနှင့် စကားဝှက်များမပါဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် အလိုအလျောက်မုဒ်တွင် ရှိနေပါက၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် မြန်နှုန်းအကောင်းဆုံးအဆင့်ရှိသူတို့ကို ဦးစားပေး၍ မည်သည့်အရာကိုမဆို အသုံးပြုခြင်း WiFi ချန်နယ် ကမ်းလှမ်းထားသည်
ဤမုဒ်တွင် အခြေခံအားဖြင့် အသုံးပြုသူ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှု မရှိပါ။ နှင့် ချိတ်ဆက်ရမည့် စက်ပစ္စည်းတွင် ပါဝင်သော ပရိုဂရမ်းဂျစ်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ လှိုင်းနှုန်းနှင့် ချန်နယ်ကို မည်သည့်အရာများနှင့်အညီ ရွေးချယ်ပါ။ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုနေရာ.
ကွန်ရက်များ၊ ကြိမ်နှုန်းများနှင့် ချန်နယ်များသို့ လူကိုယ်တိုင်မုဒ်
ဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းတုန်း Wi-Fi ကွန်ရက်သို့ ကိုယ်တိုင် ချိတ်ဆက်ပါ။ကြိမ်နှုန်းနှင့် ချန်နယ်အမျိုးအစားအချို့ကို နှစ်သက်သဘောကျသော၊ အောက်ပါအကြံပြုချက်များသည် အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည်-
ရရှိနိုင်သော Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အမှတ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ရှာဖွေပါ။: အနီးဆုံးသို့ ချိတ်ဆက်ရန် ပိုနှစ်သက်သည်။ ဤအချက်အတွက်၊ ဤအချက်အပေါ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည့် အချက်ပြပြင်းထန်မှုဒေတာ သို့မဟုတ် အချို့သော မူလ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရရှိနိုင်သော Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခွင့်အချက်များထဲမှ အလုံခြုံဆုံးကို ရွေးပါ။: အယုံကြည်ရဆုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ ပိုကြိုက်တယ်။ ယင်းအတွက်၊ အသုံးပြုထားသော အထောက်အထားစိစစ်ခြင်းအမျိုးအစား (လုံခြုံရေး ကုဒ်ဝှက်ခြင်း) ၏ဒေတာ သို့မဟုတ် ဤအချက်အပေါ် ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သော မူရင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အပလီကေးရှင်းအချို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စံပြရနိုင်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။: ရရှိနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းများ၏ အားသာချက်များကို ခံစားရန်နှင့် တစ်ခုချင်းစီ တင်ပြသည့် ပြဿနာများကို လျော့ပါးစေရန်။ ယင်းအတွက် ၎င်းကို မှတ်သားထားရမည်မှာ-
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2.4 GHZ Wi-Fi access point သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်ရန် ချန်နယ်များ နည်းပါးလာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အနှောင့်အယှက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်း လျော့နည်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် အတားအဆီးများကို တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းနှင့် ပိုမိုကြီးမားသော ပထဝီဝင်လွှမ်းခြုံမှု အကွာအဝေးကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်5GHZ Wi-Fi access point သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ နှောင့်ယှက်ခံရနိုင်ခြေနည်းပြီး ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်း ပိုမြင့်လေ့ရှိသည့် ချန်နယ်များကို ရွေးချယ်ရန် ပိုမိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အတားအဆီးများကို တိုက်ဖျက်နိုင်မှု နည်းပါးပြီး သေးငယ်သော ပထဝီဝင် လွှမ်းခြုံမှုအပိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
စံပြရရှိနိုင်သည့်ချန်နယ်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။− အသုံးအနည်းဆုံးကို ရွေးရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ထိုချန်နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်အရေအတွက် အနည်းဆုံးရှိသည့် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ တူညီသောချန်နယ်ပေါ်တွင် ထုတ်လွှင့်နေသည့် အခြား Wi-Fi စက်များ၏ ထုတ်ကုန် ထပ်တူညီမှုအနည်းဆုံးနှင့် တစ်လုံးကို ရွေးပါ။
Third-party application များအသုံးပြုပါ: အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအောင်မြင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားသည့် Wi-Fi ကွန်ရက်နှင့် အခြားပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာများကို အချို့သောအက်ပ်လီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ရပါမည်။ အခမဲ့ သို့မဟုတ် ပွင့်လင်းသောရင်းမြစ်များ ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းမွန်သည့်အရာများကြားတွင် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဟုခေါ်သည်။ Wi-Fi Analyzer (open-source)၊ WiFi Analyzer (အခမဲ့ ဝေးကွာခြင်း), Signal Strength ၊ ငါ့ Wi-Fi မှာ ဘယ်သူရှိလဲ ၊ Fing – Network Scanner ၊ Network Analyzer ၊ နဲ့ WiFi Guard တို့ ၊ ၎င်းတို့သည် Android၊ iOS နှင့် နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
WiFi ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အရေးကြီးသော အကြံပြုချက်များ
Wi-Fi စက်များ (Access Point) ကို သင့်လျော်သော အမြင့်နှင့် အကွာအဝေးတွင် ထားပါ။− စံပြသည် မြင့်သည်ဖြစ်စေ၊ နိမ့်သည်ဖြစ်စေ ဝေးလွန်းသည်ဖြစ်စေ မပိတ်ဘဲ၊ အကွာအဝေး သို့မဟုတ် အတားအဆီးများကြောင့် မလိုအပ်သော အချက်ပြပါဝါဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် စံပြသည် အလွန်မြင့်သည်ဖြစ်စေ၊ စံပြသည် အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်ရမည့်နေရာမှ အမြင့်နှင့် အကွာအဝေးများဖြစ်ပြီး အနီးနားရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ထုတ်လွှတ်သည့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများမှ ကင်းစင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Wi-Fi စက်ပစ္စည်း (Access Point) ၏ အင်တင်နာများကို မတူညီသော လမ်းကြောင်းများတွင် နေရာချပါ။- အင်တာနာများကို အလျားလိုက်၊ တစ်ခု(များ) အလျားလိုက်နှင့် တစ်ခု(များ) ဒေါင်လိုက်ထားရှိရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကြားတွင် 90 ဒီဂရီ ထောင့်များကို ပုံဖော်ထားသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ လွှမ်းခြုံမှုကို ရရှိပြီး စက်ပစ္စည်းများသည် အချက်ပြမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
20 MHz နှင့် 40 MHz အသုံးပြုထားသော ချန်နယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။: 40 Mhz ရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချက်ပြမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အခြားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များနှင့် တိုက်မိနိုင်ခြေပိုများသည်။ 40 Mhz ချိတ်ဆက်မှုများသည် packet ဆုံးရှုံးမှုနည်းသည်။
အခြားအထောက်အကူဖြစ်စေသော အကြံပြုချက်များ: လိုအပ်သည်ဟုယူဆပါက Wi-Fi စက်ပစ္စည်း၏ Firmware ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားပြီး Wi-Fi signal repeaters ကိုအသုံးပြုပါ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော ပိုကောင်းသော Wi-Fi စက်ပစ္စည်းအသစ်ကို ရယူ/ဝယ်ယူပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ နောက်ထပ်နည်းပညာအချက်အလက်များ နှင့်ဆက်စပ် သံသယများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ ပြဿနာများဆီသို့ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအောက်ပါတို့ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ link ကို.
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နည်းကို သိရှိခြင်း။ "အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်" အချိန်မှန် သို့မဟုတ် နေရာမှန်တွင် တင်ပြခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများနည်းသည်။. တဆက်တည်း ခံစားရတာကို အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုသင်အများကြီးပို တည်ငြိမ်ပြီး မြန်ဆန်သည်။. ထို့အပြင်၊ အခြားသူများကို ၎င်းတို့အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးခြင်းကဲ့သို့သော အချို့ကိစ္စများတွင် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများအိမ်မှာရော အလုပ်မှာရော။
ဤစာစောင်သည်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် «Comunidad de nuestra web». သင် ၎င်းကို နှစ်သက်ပါက ၎င်းကို ဤနေရာတွင် မှတ်ချက်ပေးပြီး သင့်အနှစ်သက်ဆုံး ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ချန်နယ်များ၊ အုပ်စုများ သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ရက်များ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်စနစ်များရှိ အခြားသူများနှင့် မျှဝေပါ။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပင်မစာမျက်နှာ နောက်ထပ်သတင်းများရှာဖွေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ တရားဝင်အဖွဲ့ FaceBook.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » အလိုအလျောက် သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင် WiFi ချန်နယ်- ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။